Rakanga rachena Mazino Tips Unogona Edza Out Today! | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "Rakanga rachena Mazino Tips Unogona Edza Out Today!"
Vanhu vakawanda vanotanga kuva nehanya une meno semagada kuyaruka. kurota uku kunogona kuva nyore chichizadzika kunyange kana uchida kuti. Unogona kuva mazino machena nokudzidza zvakanakisisa unyanzvi kunze uko uye kutevera zano rakanaka. Mashoko acho pano achakuudzai mashoko whitest mazino zvinobvira.
Garai kure fodya, kofi, uye waini. Mumwe nomumwe izvi rine makemikari vanoomerera uye discolor mbeu mazino ako. Kana uri kuda kuderedza kana kubvisa manwiro ako chero izvi, ipapo iwe unofanira Kukwesha mazino vako vanokutevera muvapedze. zvino Kune Mini munwe brushes zviripo anogona kupa chiedza hasha pameno nharaunda. Izvi zvingava nyore pane kuva chikwesheso nemi zvizere nguva. The bhuracha wacho roughness ndiko unozviwanira mazino ako akachena.
Chaunotanga kuita chero zviitwe kwemeno Chirongwa nechokwadi kuti imi kuwana cleanings unyanzvi. Wana mazino ako nenyanzvi akachenesa mwedzi mitanhatu ose uye kuti yako kugadzwa inotevera apo muhofisi wako kuchenesa uno.
Unofanira kungwarira chaizvo kana kudya kana kunwa pashure une meno zvenyu whitened. Geda kwemeno kazhinji vara pashure vasina whitened. Edza usaparadzire zvokudya vane ruvara yerima mushure iwe kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. kofi, semuyenzaniso, muenzaniso wakanaka mumwe anogona aizonyatsovachenesa inokonzera ch mazino enyu achava kubatwa.
ZANO! Shandisa mastrawberry sechinhu chokurapisa mazino whitener. Zvepanyama yeimwe yakawanikwa mastrawberry kuchaita kuzvichenesa zvikadaro meno pasina kushandisa makemikari.
kuzvichenesa zvikadaro Mazino
Meno ako anogona kuva aikanganiswa rakanga rachena zvigadzirwa. It varege kukuvara nokusingaperi, asi achiri zvichirwadza chaizvo. Regai kushandisa chigadzirwa uende ona chiremba wemazino wako nekukurumidza. Aigona vanokurudzira rudzi chigadzirwa isingazotambudzwi pave mazino ako kuti nzira.
ZANO! Verenga mirayiridzo pamba zviitwe zvigadzirwa zvachose asati atanga kurapwa. Kuita izvi kuchaita chete kuti mazino kuti zvomoto, muromo kuti asingafariri, uye meno venyu kuti ukama.
Fruits muri mukuru uye dzinongoitika nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino whiteners. A nemudzimai mienzaniso yakanakisisa zvibereko zvinogona kuzvichenesa zvikadaro meno maranjisi uye maranjisi. Munogonawo kushandisa orenji svuura pamusoro pemvura mazino ako.
Mouthwash freshens mweya yenyu uye anouraya utachiona zvinogona kukonzera gingivitis; zvisinei, mamwe marudzi mouthwash kunogona discolor mbeu mazino ako. Shandisa mouthwash kuti haasi utsinye uye iva nechokwadi chokuti hausi rakajeka ruvara.
ZANO! Nzira inoshamisa kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako zvishoma iri uchishandisa zvakasikwa mastrawberry. Vanhu vakashandisa mastrawberry somusha whitener kwemakore akawanda.
Kugara mushonga wemazino uye rakanga rachena mushonga wemazino regai kusiyana zvikuru. Usadonha nokuti zvinhu zvinodhura kuti hadzishandi. Uchava vanongoita vachimwaya mari kure.
Unogona kuita zviitwe pachako mushonga wemazino wako vamwe peroxide uye kubikira pasoda. Rega namatidza ichi kuti zvinopfuura porous pemvura mazino enyu mashanu gumi maminitsi asati kwokugeza mazino. Regai kukwesha mazino enyu nehasha, ichava kuva ruoko mu muchishungurudza mazino enyu.
ZANO! Chenjera uye kushandisa meno zviitwe zvigadzirwa sezvinonyatsoita rinotungamirirwa. Mazino rakanga rachena zvinogona kuva kungatikanganisa kana zvikuvadze zino enamel, mazino uye kunyange tsinga.
Imwe nzira yokuwana mazino akachena kuramba chena kuti amutse dzose mazino cleanings.
A nzira yakatinakira yakajeka kunyemwerera yenyu kungokonzera kutsiva kwenyu mushonga wemazino anoshandiswa ane rakanga rachena mushonga wemazino. mushonga wemazino Izvi zvikuru afunga kubvisa echitema uye nebheji sezvazvakanyorwa whitens. Over kwenguva yakareba, muchaona meno akachena uye kuderedzwa echitema.
ZANO! Yeuka kuti nekorona ndivo yakasiyana fuma pane dzenyu dzinongoitika mazino, uye regai kupindura mazino whiteners. Rakanga rachena mazino ako kunogona kukonzera ane gogonera ruvara mharidzo kana korona yako inogona kuonekwa paunenge kunyemwerera.
Dzivisa mazino-staining zvinwiwa kana uchida kuti mazino machena. Mienzaniso hwahwa izvi zvinosanganisira kofi, kofi uye chinyakare tii. Kana uchida kudzivisa staining sezvo ukanwa izvi, funga sipping mvura pakati sips pamusoro chinwiwa wako kuderedza staining.
Regai rakanga rachena mazino ako kana kurapa kunokonzera marwadzo kana aikanganiswa. dzimwe nguva rakanga rachena zvinogona kuwedzera nehanya uye kukonzera kuzvimba. Kana izvi zvikaitika, kurega kushandisa whitener pakarepo, uye kutaura nemi wako anenge akasiyana chigadzirwa kuti zvaizova akakodzera tisanzwe mazino.
ZANO! Chase kunwa anokonzera echitema nemvura. Kana uine imwe mvura pashure rima mvura (kofi, tii, Pop, nezvimwewo.
Idya apuro nokukurumidza yakajeka mazino ako kana vane chimiro kwemeno akachena. Crunchy zvokudya uye miriwo une hasha unhu hunogona kukubatsira kuchenesa mazino ako vasina kukuvara zvikuru pamusoro enamel yako.
Kumbira chiremba wemazino kwenyu Ngirozi zvinogona kushandiswa pamba kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Nzira iyi inosanganisira nekugadzirira hayo mutauriri kuti raguta Ngirozi. Ukapfeka kuti imwe nguva mumwe usiku mbiri kana nhatu. Meno ako anogona kuwana sezviri sere noruvara akachena achishandisa nzira iyi.
ZANO! Dentist Kushanya zvinokosha kuwana mazino akachena. Kuvaka yakarongwa cleanings muhupenyu hwako kunokosha mazino akachena.
Rega kushandisa chero rakanga rachena kurapwa kana uchinzwa aikanganiswa nemazino ako kunzwisisa. Unofanira bvunza mazano ako chiremba wemazino kuti sezvo unogona kukonzera chaidzo kukuvara mazino ako. Unofanira kutaura chiremba wemazino wako kufunga chii nzira yakanyanya kunaka kuti imi kana totaura zviitwe kwemeno.
Kukwesha mazino ako zuva nezuva ndiyo nzira yakanakisisa dzirambe utano, uye vadzivirirwe in, uye unsightly staining. Kushandisa rakanga rachena mushonga wemazino ari nzira huru kuvandudza chimiro mazino ako. Kune nzira dzakawanda, saka vamwe tsvakurudzo, uye achakubatsira kuwana zvakanakisisa zviitwe mushonga wemazino nokuda zvaunoda.
ZANO! Iwe uchava nechivimbo pamusoro kunyemwerera kwako kana uri kuva nechivimbo mweya yenyu. Licking chanza chako (maoko enyu okutanga!) anogona kukuudza kana mweya wenyu zvakaipa kana kwete.
Kukwesha mazino enyu nguva dzose kana uine mukuru smile.Food uye anonwa vanogona kuvaka pamusoro mazino ako uye discolor mbeu kana chidodzi navo pashure dzimwe nguva. Haungakokerwi nehanya discoloration mazino ako kana uine dzose wenguva dzose mazino-kwokugeza mazino yokungoitawo.
Rangarirai kukosha flossing mazino ako nguva dzose. Flossing anopiwa masarasara mukati mazino ako uye anorwa nebheji, izvo Inoita kuti atindivare. Unofanira kupa mazino enyu flossing pashure ose kudya; floss ndiye inotakurika zvakakwana kuti unogona kuutakura newe kana muchidya pamba. Usati waenda kunorara usiku, zvakakosha chaizvo kuti floss mazino ako kuitira kuti unogona kubvisa bhowa utachiona kuti vave chipo mumuromo mako.
ZANO! Dzivisa kofi, tii, colas nezvimwe zvinwiwa dzakarukwa rima kuchengeta mazino ako avo whitest. Mumwe nemumwe hwahwa izvi achaita mazino ako ave rakabuda ruvara.
Inwa zvakajeka chete zvinwiwa kwamazuva mashoma mushure iwe vakapindira mazino ako whitened.
Kucheka pasi zvinwiwa, akadai mushaba Pop kana waini, kuchakubatsira kuva mazino akachena. Nekuti mushaba newaini rinogona chidodzi mazino ako, unogona kuchengetedza kunyemwerera chena nokunwa shoma nevasina. Kana unofanira kuva nazvo, Zvisinei, kukwesha mazino enyu nekukurumidza pashure kupedzwa. Izvi achavapa shoma nguva aizonyatsovachenesa mazino zvakare zvakaipa.
ZANO! Kuti tiwane mazino ako akachena, ungashandisa nemakwati kubva walnuts muti. Vachidzipukuta izvi mazino enyu kwazvo vanorichenesa navo uye anoita kuti ndichene.
Ichi nzira kuti kute-, asi anopa Unokurumidza nemigumisiro.
Vapedzei makuru kwazvo dheri zvokudya. Dairy zvinogadzirwa vane zvicherwa, akadai karusiyamu, kuti achachengeta mazino ako akatarira wakasimba. The enamel mazino ako achava nesimba uye zvishoma kubatwa discoloration. Paunenge zvaisanganisira izvi nezvokudya mhando kupinda zvaunodya iwe zvipe akachena uchinyemwerera.
ZANO! Kukwesha mazino enyu ane kubikira pasoda uye peroxide namatidza kuti kuzvichenesa zvikadaro. Zvose zvinhu dzinowanzoshandiswa mu rakanga rachena toothpastes, uye vanhu vakawanda varambe vari mumisha yavo.
Idya muriwo nemichero kuti fibrous unaku inogona kuita sechinhu chokurapisa scrubber nokuda mazino ako. A mienzaniso mishomanana zvokudya nezvazvo zvinosanganisira maapuro, apple, gaka uye makerotsi. Shandisa mazino ako zvose kutsenga kukwira crunchy zvokudya kuwana kufadza nomugumisiro.
Regai kuputa pazvimonera kana midzanga kana iwe unogona kubatsira nayo. Ava vose vanozivikanwa kuti munhu discoloration kwemeno. Kurega kusvuta kuchabatsira kudzivisa yellowing kwemeno. Kune mishonga kuti zvinobudirira kunogona kukubatsira kurega kusvuta kana ukaenda kuna chiremba. Unofanira kuva zano uye kutsigirwa zvakakodzera.
Vanhu Vazhinji dai vakanga mazino akachena. Chinetso ndechokuti vanhu vakawanda havatendi kuti vanogona kuzvichenesa zvikadaro mazino avo, saka havana kumbobvira kunyange kuedza. Zvichitevera Mazano uye anonyengera kubva nyaya ino vachakupai mazino zvakanaka chena shoma nguva.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pa 12:59 AM
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: mazino machena, Rakanga rachena Mazino Tips, Rakanga rachena Mazino Tips Unogona Edza Out Today!